Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Dhulgariir xoog badan ayaa ku dhuftay Jasiiradda Alaska
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dhulgariir xooggan oo ku dhuftay Alaska
Jasiiraddu waa meel kulul oo dhul gariir ah, waxayna ku fadhisaa barta kulanka Waqooyiga Pacific iyo taarikada tectonic North America.
Dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay Jasiiradda Alaska.
Dhulgariir ayaa ruxay degitaanka Perryville.
Lama soo sheegin dhimasho, dhaawac ama waxyeello.
Sahanka dhulka ee Maraykanka (USGS) ayaa ku warramaya in dhulgariir xooggan oo cabirkiisu yahay 6.9 uu ku dhuftay Jasiiradda Alaska subaxnimadii Sabtida.
The USGS wuxuu ku qiimeeyay dhulgariirka 6.9 cabirka baaxadda, qiimeynta lagu tilmaamay “xoog” iyo jajab dhibic ka hooseysa “weyn”.
Dhulgariirkan, oo ka dhigi lahaa aag dhisan, ayaa ruxay degitaanka Perryville, oo ah gobol ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo dhul gariir.
Dhulgariirku wuxuu ka dhacay meel ka baxsan xeebta Jasiiradda Alaska, raad dhuuban oo dhul iyo jasiirado ah oo ka soo qulqulaya dhul weynaha Alaskan una gudba Badweynta Baasifigga xagga Ruushka. Jasiiraddu waa dad aan badnayn, magaalada ugu dhow ee xuddunta u ah dhulgariirku waa Perryville, dejinta qiyaastii 100 qof, oo qiyaastii 85 mayl (136km) u jirta waqooyi -galbeed.
Jasiiraddu waa meel kulul oo dhul gariir ah, waxayna ku fadhisaa barta kulanka Waqooyiga Pacific iyo taarikada tectonic North America. Waxay hoy u tahay foolkaano badan oo firfircoon, waxayna badanaa arkaan dhulgariirro waaweyn. Dabayaaqadii bishii hore ayay ahayd markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 8.2 uu ku dhuftay isla goobtii uu ku dhuftay dhulgariirkii Sabtidii, waxaana xigay saddex dhulgariir oo kala ahaa 5.9, 6.1, iyo 6.9 magnitude. Dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu weynaa ee ku dhufta Mareykanka tan iyo 1965, waana kii ugu weynaa ee soo mara taariikhda adduunka tan iyo 2018. Hase yeeshee, lama sheegin wax khasaare ah.
Oktoobar 22, 2021 at 09: 37